Uphume ngezinkani umphakathi uzokweseka imindeni kwelokudlwengula | News24
Uphume ngezinkani umphakathi uzokweseka imindeni kwelokudlwengula
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Lawa ngamanye amalungu omphakathi abezokweseka imindeni emibili ecaleni lokudlwengulwa kwamantombazane amabili ayo.
UMPHAKATHI waseMpophomeni ugcwale ngaphandle kwenkantolo kamantshi eHowick ngoLwesine olwedlule ukuzokweseka imindeni yamantombazanyana amabili okusolwa ukuthi adlwengulwe umlisa oneminyaka engu-40 ubudala uMnu Bhekumuzi Mbokazi.
UMbokazi udedelwe ngebheyili ka-R2000 njengoba ezobuyela enkantolo zingu 29 Ntulikazi lapho ezobe esevela enkantolo okwesithathu ebhekene naleli cala lokunukubeza lamantombazanyana afunda kwesinye sezikole samabanga aphansi eMpophomeni ngenyanga edlule.
Umphakathi ubudinwe ugane unwabu emva kokuthi ijaji lithathe isinqumo sokumnikeza ibheyili.
Yize kunjalo umphakathi uphinde waqinisekisa ukuthi leli cala uzoza uzoleseka lize liphele yize ungeneme mayelana nesinqumo sokukhishwa komsolwa ngebheyili. Kuzothanyelwa leli cala amalungu omphakathi kanye nalawo avela ezinhlakeni ezihlukene ezifana neSAPS Youth Desk, amalungu e-Treatment Action Campaign (TAC) nawo abezoveza elawo igalelo ngokuzoba yingxenye yomphakathi obubhikisha ngaphandle kule nkantolo. Usihlalo we SAPS Youth Desk uMnu Ndumiso Zuma uthe ukuza kwabo enkantolo njengamalungu entsha eMpophomeni ukuzokweseka umndeni wakwaDlamini nowakwaKhanyile, okuyimindeni edlwengulelwe abantwana bamantombazane ngenyanga edlule uNhlangulana (June).
UKhanyile uqhube wathi njengentsha akuzange kuvume ukuthi bahlale bagoqe izandla bathule babukele lesi senzo esihlasimulisa umzimba.
“Inhloso yethu namhlanje ukuzothi akuphele ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane ngoba kuyinto embi futhi esingeke siyemukele kulo mphakathi wakule ndawo.
“Asihambisani neze nalesi senzo esenzeka kule ndawo esihlala kuyona. Sibone kuyinto enhle ukuthi thina njengentsha siphune ngobuningi bethu ukuzokhuza umhlola siphinde siqinisekise nasemindenini ukuthi sikhona ukuzoyeseka osukwini lwanamhlanje.
“Esikufisayo ukuthi umthetho udlale indawo yawo ngokuthi ungabi nazwelo kumenzi walesi senzo kodwa ajeze futhi athole isigwebo esifanele ukuze afunde isifundo,” kubeka uZuma.
Umgqugquzeli weTAC KwaZulu-Natal uMnuz Mzamo Zondi uthe baphambene nokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane.
“Inyanga uNhlangulana iqala ibe nesonto lapho sisuke sigubha futhi sisuke seluleka ngamalungelo nangokuphathwa kwabantwana. Kuyona futhi le nyanga kuba inyanga lapho kusuke kubungazwa intsha ezweni lonke. Sithi siyi-TAC asiwadingi amadoda azokwenza njengomsolwa.
“Sifisa futhi siyagcizelela ukuthi umthetho udlale indawo yawo. Sisazophuma ngobuningi bethu ukuzoba ingxenye yaleli cala yize umsolwa ekhishiwe ngebheyile. Lokho okusho ukuthi usephumile noma usededelwe,” kusho uZondi.
Amalunga omphakathi athembise ukubuyela futhi azoba yingxenye yaleli cala lapho umsolwa ezovela